Ifowuni entsha ye-Samsung iya kubiza i-3.000 yeedola | Iindaba zeGajethi
Ifowuni entsha ye-clamshell iya kuxabisa i-3.000
Iifowuni zikaClamshell yayiziiklasikhi ngasekupheleni kweminyaka yama-90s nakwii-2000s zokuqala, kodwa ekuhambeni kwexesha zaye zanyamalala kwintengiso njengoko iimfuno zabasebenzisi zaqala ukuba zizikrini ezikhulu, into eyayibekwa kwisitishi semoto ngelo xesha. Kodwa iteknoloji ihambe indlela ende kwiminyaka yamuva kwaye Okwangoku kunokwenzeka ukuba kwenziwe iifowuni zeklamshell ezinempawu ezifanayo Ngaphandle kwe-smartphone ngaphandle kokuncama iindlela apha endleleni. Isamsung yenye yeenkampani eziqhubeka ukumilisela olu hlobo lwesiphelo kwimarike. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele malunga Ifowuni ye-Samsung Galaxy 2, i-terminal enezibonelelo ezifanelekileyo kodwa kubathandi bezi fowuni ingaphezulu ngokwaneleyo.
Esi sigxina sifumaneka kuphela eUnited States, apho olu hlobo lwesiphelo lithandwa kakhulu, kwaye nase China. Inkampani yaseKorea i-Samsung isebenza kwisiphelo sendlela solu hlobo, i-SM-W2017, kodwa ngokungafaniyo neGolden Folder 2, Esi siginali sisinika izikrini ezibini ngomsebenzi oBoniswa rhoqo, enye kwicala ngalinye, iscreen se-AMOLED esine-intshi ezingama-4,2 kunye nesisombululo esipheleleyo seHD. Ngaphakathi kwisiphelo sendlela sinokufumana i-Snapdragon 820 kunye ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina yangaphakathi enokwandiswa ngamakhadi e-MicroSD. I-SM-W2017 idibanisa iikhamera ezimbini ze-12 mpx kunye ne-5 mpx kunye nebhetri ye-2.3 mpx, umfundi weminwe kwaye uza kwintengiso nge-Android 6.0.
Ngokuka-Sammobile, ixabiso lesi siginali linokuba malunga ne-3.000 zeedola, ixabiso eliphezulu kakhulu kwaye lijolise ngokufanelekileyo kwindawo ethile yomsebenzisi. Olu hlobo lutsha lwesiphelo sendlela okwangoku iya kufumaneka kuphela kwimakethi yaseAsia, apho ukuxhomekeka kolu hlobo lweefowuni kusengcono kakhulu. Okwangoku asilazi igama lokugqibela lesiphelo okanye siza kufika nini kwintengiso, kodwa into esiqiniseke ngayo kukuba ikhangeleka inomdla kwaye ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesinye nesibini singathanda ukonwabela i-terminal kwakhona. Chwetheza ngezibonelelo zangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ifowuni entsha ye-clamshell iya kuxabisa i-3.000
I-HTC yazisa i-HTC 10 Evo kule nyanga